Home » Vaovao momba ny dia an-tserasera » Hevitra momba ny varotra varotra amin'ny vanim-potoanan'ny pandemika
Dr. Peter Tarlow dia nizara ny eritreriny momba ny varotra aorian'ny COVID
Miaraka amin'ny vaksinin'ny COVID-19 eran'izao tontolo izao, ny fiverenan'ny dia sy fizahan-tany dia efa akaiky. Ka inona no tokony ho fomba fiasa amin'ny famerenana ireo mpizahatany ara-batana rehefa avy nanao ny zava-drehetra nandritra ny fotoana ela tao amin'ny tontolo virtoaly izy ireo?
Ny COVID-19 dia tsy ny aretina sy fahafatesan'ny ain'ny olombelona ihany no nahatonga ny aretina, fa ny fihenan'ny dia sy ny fizahan-tany ary ny vokatra vokariny.
Ahoana ny fomba hanintonana ireo mpitsangatsangana izay lasa zatra miaina anaty tontolo voafaritra mba hiverina any amin'ny toerana fitsidihana.
Paikady sy hevitra momba ny varotra ho an'ny mpandraharaha amin'ny fizahan-tany sy ny tompon'andraikitra amin'ny fizahantany.
Na dia eo aza ny fahatongavan'ny vaksinina sy ny tsimok'aretina antenaina lehibe dia fantatry ny mpitarika ny fizahantany fa tsy ho mora ireo volana vitsivitsy ho avy ireo. Amin'ny toerana maro dia nisy onja faharoa na fahatelo, ary firenena hafa izao no miatrika karazana soritr'aretin'ny virus. Mandra-pahatapitry ny areti-mandringana, ilaina ny fampitomboana ny fahaizantsika mivarotra na ho an'ny vokatra azo tsapain-tanana na ho an'ireo vokatra tsy azo tsapain-tanana nefa tena ampahan'ny fizahan-tany sy fizahan-tany. Noho ny fihenan'ny toekarena COVID-19 manerana ny ankamaroan'izao tontolo izao, ny fomba fivarotana sy ny varotra antsika dia mety hamaritra ny fahasamihafana misy eo amin'ny taona fanarenana azo ekena sy ny taona tsy fahombiazan'ny orinasa. Mihoatra noho ny taloha ho an'ny orinasa maro. ririnina (faritra avaratra) ity ririnina mitambatra lasa lohataona ity dia mety hiatrika toe-javatra mety hanatsarana.
Ny fisalasalana ara-toekarena dia niseho tamin'ny fomba maro - tsena marobe no miakatra am-pandehanana, ny fitomboan'ny tsy fananan'asa no olana lehibe, tsy tafarina ny kaompaniam-pitaterana an'habakabaka, ary midina erak'izao tontolo izao ny vola miditra amin'ny hetra. ny indostrian'ny fizahan-tany sy fizahan-tany manana andraikitra lehibe indrindra hanampiana ny toekarena eto an-toerana sy ny firenena hiverina amin'ny laoniny.
Amin'ity farany ity, Tidbits momba ny fizahantany manolotra fomba fijery vitsivitsy momba ny varotra. Hevitra tsara foana ny mahatadidy fa ny varotra dia tsy marketing ary aorian'ny vanim-potoana fivarotana fivarotana amin'ny solosaina, ny tompona magazay sy ny tompon'andraikitra fizahan-tany dia tsy maintsy miasa mafy mba hahazoana mpanjifa indray.
Ny marketing dia ny fampidirana ny mpanjifa na ny mpanjifa hiditra amin'ny fivarotana na toeram-pivarotana, ary ny varotra no mitranga raha vao tapa-kevitra ny hiditra ao amin'ilay trano ilay olona.
Satria mitana andraikitra lehibe amin'ny fizahan-tany ny fiantsenana, zava-dehibe ny fahafantaran'ny matihanina fizahantany rehetra zavatra momba ny varotra sy ny fiaraha-miasa amin'ireo tompona magazay sy mpivarotra eo an-toerana. Tsy sahy manadino izany ireo matihanina amin'ny fizahantany raha ny fiantsenana dia fanatanjahantena lehibe amin'ny fizahan-tany ary raha mihena ny fividianana fivarotana an-tserasera dia tsy ny ampahany lehibe amin'ny tombam-bidin'ny fizahan-tany ihany no very fa ny asa fizahan-tany manan-danja ihany koa.
Matetika loatra ireo matihanina momba ny fizahantany dia mandany vola be amin'ny fikarohana, fahaiza-mamorona ary vola amin'ny marketing ary kely fotsiny amin'ny fomba fampisehoan'izy ireo ny vokatra na ny zavatra mitranga aorian'ny fahatongavan'ilay mpitsidika eny an-toerana. Toy izany koa ireo akademian'ny fizahan-tany izay mety manasongadina data izay tsy manampy matetika an'ireo olona miasa amin'ny sehatry ny fizahantany. Manampy amin'ny paikadin'ny varotra, Tidbits momba ny fizahantany manolotra fitsipika sy hevitra fototra vitsivitsy:
-Tadidio fa afaka mivarotra entana tsy ny zavatra fotsiny ianao, fa koa ny hevitra sy ny hevitra. Ny fizahantany dia momba ny hevitra sy ny famoronana fahatsiarovana. Ireo vokatra ireo dia tokony hamidy am-pitandremana ihany koa. Na inona na inona ny vokatra fizahan-tany dia asehoy amin'ny toerana sy toe-javatra isan-karazany izany mba hidoboka ao anaty tsy fahatsiarovan-tena ilay hevitra ary hijanona ao amin'ny toerana misy anao ilay mpitsidika mandritra ny fotoana lava kokoa.
-Asehoy ny fampisehoana an-tsaina ny filan'ny mpanjifa. Ampidiro ao amin'ireo lahatsoratra asehonao sy fampahalalana izay ilaina fa tsy tsara tarehy fotsiny. Ohatra, raha mivarotra brochure ianao dia izao no fitsipika: ny tsotra dia tsara kokoa. Brochure fizahan-tany be loatra no feno fampahalalana ka amin'ny farany tsy misy mamaky na inona na inona.
-Afoo ny fikorontanana ary mampivoatra lohahevitra. Be loatra dia tsy tsara mihitsy! Raha be loatra ny aseho na be loatra ny tolotra dia misavoritaka matetika ny saina. Misafidiana lohahevitra iray, hazavao izany, ary avelao ny olona hahita izay anananao nefa tsy hanakorontana ny sainy. Ny ankamaroan'ny olona dia afaka mifantoka amin'ny zavatra iray tsy misy fanelingelenana fa ny lohahevitra be loatra amin'ny toerana iray dia miteraka toetran'ny cacophony ara-tsaina.
-Manaova fotoana hanakianana ny toerana misy ny orinasanao sy ny biraonao amin'ny fomba fijery mpivarotra. Fakafakao ny fomba nandaminana ny habakao, fivarotana, birao mpitsidika, manintona na koa sekoly. Inona no zavatra voalohany hitan'ny mpanjifanao na ny mpitsidika anao? Inona no karazana ambiansy noforoninao, ary manatsara ny vokatra amidinao ve izany? Misavoritaka ve ny vavahady fidirana sa mangatsiaka be loatra? Ahoana ny fofona eo an-toerana? Misy voninkazo betsaka ve sa maloto ny toerana eo an-toerana? Aza adino ny maha-zava-dehibe ny trano fidiovana. Matetika ny olona no mividy any amin'ny toerana madio ny trano fidiovana.
-Na inona na inona vokatrao dia mitadiava fomba hanintona ny masonao. Matetika ny entana lehibe sy maro loko dia hahasarika ny mpanjifa mamela azy ireo hijery ireo entana manodidina. Ny lakilen'ny varotra tsara dia ny famoronana. Raha tsy aseho amin'ny fomba tsara ny varotrao na ny vokatrao dia tsy hiraharaha azy ny mpanjifa. Ilaina ny antsipiriany sy ny fikarakarana. Tadidio fa ity fitsipika ity dia mihazona tsy ho an'ny vokatra azo tsapain-tanana toa ny entam-pivarotana ihany fa ny vokatra tsy azo tsapain-tanana, ny hetsika ary koa ny fanabeazana.
-Ny jiro dia tokony hameno ny tanjonao / foto-kevitra fa tsy hiasa manohitra azy. Misy fotoana ho an'ny jiro rehetra. Mieritrereta amin'ny alalàn'ny zavatra ezahanao hotanterahina. Moa ve ny tanjonao hahatonga ny varotrao ho mora mahita sa mitady hanana toetra romantika? Hisy fiatraikany amin'ny fomba fahitan'ny mpanjifanao ny tenany na ianao ve ny jiro? Te hahita izay novidiny ve ny mpanjifanao, sa aleon'izy ireo fomba malemy paika kokoa? Saintsaino amin'ny fomba ahafahanao mampiasa jiro hitarihana ny olona amin'ny toerana samihafa ao amin'ny magazay, hotely na manintona anao.
-Ataovy manerana izao tontolo izao ny fampisehoana ny fahavaratra. Miaina anaty tontolo kolontsaina marolafy isika. Miezaha ho hendry hahafantatra ireo fivavahana sy fialantsasatra ary firenena samy hafa. Ny fizahan-tany dia miresaka momba ny fankalazana ny “hafa”, ary mitady amin'ny fomba feno izy fa tsy fanatambarana. Mampiasà fampisehoana fizaran-taona mba hampidirana vondron'olona betsaka araka izay azo atao sy ho fitaovana fampianarana sy fanabeazana. Mamorona fampisehoana miaraka amina fialantsasatra maromaro. Ohatra, azonao atao ny mampiasa lohahevitra ekolojika hampiroboroboana ny fialantsasatra izay matetika tsy mifandraika amin'izany lohahevitra izany. Ny haingon-trano izay mampiseho ny fomba fahitan'ny mpividy amin'ny fampiratiana ny vokatrao dia mety hahatonga ny mpitsidika tsy hieritreritra ny dia hiverina ihany, fa hilaza amin'ny namanao sy ny fianakavianao momba ny toerana misy anao koa.
-Drafitra ny fampirantianao mba hampidirana zavatra na toetranao na fiaraha-monina. Ny fampisehoana tsy manam-paharoa dia nanjary mahasarika ny tenany ary matetika manampy ny traikefan'ny mpanjifa amin'ny ankapobeny sy ny fahatsapany fa miahy azy ianao. Andramo aseho amin'ny fampisehoana anao fa manan-danja aminao ny mpanjifanao / mpitsidika anao. Amboary tsara ny fampirantianao. Ireo zavatra lehibe misy loko manankarena dia mazàna misarika ny saina. Miasa hatrany hanome aingam-panahy ny mpanjifanao.
-Raha ny famolavolana fampisehoana dia nisafidy tsara ny lokonao ary avy eo mampiasa loko sy loko maro hafa! Ny loko marevaka dia afaka mamonjy fampisehoana na mamorona fahatsiarovana. Na ny talantalana brochure na fitoeran-drakitra aza dia azo avadika ho traikefa famoronana amin'ny fampiasana loko marevaka. Mampiasà loko hamelomana ny sehatra rehetra. Misafidiana loko izay hampahatanjaka indray ny hafatrao. Noho izany, ny ankizy mianatra dia mianatra tsara indrindra rehefa mitondra azy ireo amin'ny fahatsapana fahaiza-mamorona ny loko, raha ny efitranon'ny trano fandraisam-bahiny kosa mety mitady hampiasa loko milamina kokoa izay mampiroborobo ny torimaso. Tsy mila lafo ny manampy loko. Ohatra, ny fonosana fonosana ampiasaina ao ambadiky ny talantalana dia afaka manova ny endrika fisehon'ny fisehosehoana iray.
-Aza mivarotra zavatra fotsiny fa manome zavatra koa. Tian'ny olona ny mandray zavatra maimaimpoana. Mamorona trano misokatra, manaova fanomezana ary miova ho eo amin'ny toeranao fa tsy traikefa amin'ny fiantsenana fotsiny fa hetsika iray. Ireo souvenir dia manao dokam-barotra maimaim-poana ihany koa izay mamorona feo tsy am-bava fotsiny fa koa mamporisika ny orinasa hiverimberina.
- Avelao hiteny ho azy ny varotra. Misy ny atao hoe serivisy tsara ary misy ihany koa ny zavatra be loatra, na be loatra ny asa fanompoana. Ohatra, tsy misy olona tia mpandroso sakafo manelingelina sakafo foana hanontany momba izany. Avelao ilay olona hahafantatra fa eo ianao fa aza mivezivezy amin'ny mpanjifanao.